သုတရသ Archives - MM Daily Life
ေျဖးေျဖးေမာင္းပါ ဒ႐ိုင္ဘာရယ္ သီတာ ရင္ေတြတုန္လြန္းလို႔ပါ
ဖြေးဖြေးမောင်းပါ ဒရိုင်ဘာရယ် သီတာ ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ပါ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ မြစ်ကြီးနားကနေ မုံရွာမန္တလေးဘက် ခရီးသွားစရာ ရှိ၍ ကားလက်မှတ် ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ ဘုန်းကံအရှိန်အဝါပဲ နည်းလို့လား၊ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လား မပြောတတ်။ ဆရာတော် ခရီးသွားတိုင်း ရှေ့ဆုံးခုံတန်း မရတတ်။ တစ်ဆယ်နောက်က ထိုင်ခုံနံပါတ်သာ ရလေ့ရှိသည်။ ဒါကို ဆရာတော် မကျေနပ်ချင်။ သံဃာခုံလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ အမျိုးသမီး ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ ထိုင်နေပြီး မိမိက တစ်ဆယ်နောက်မှာ ထိုင်ရလေ့ရှိတာကိုလည်း သတိထားမိသည်သာ။ လမ်းကစောင့်စီးမည်ဟု ကြိုတင်မှာကြားထားသဖြင့် ကားလာချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေလိုက်သည်။ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်စောင့်လိုက်ရပြီး ဆရာတော်စီးမည့်ကား ဆိုက်လာသည်။ အထုတ်အပိုးနှင့် စောင့်နေသည်က ဦးနန္ဒိမာ တစ်ပါးသာ။ ကားစပယ်ယာက ဆရာတော်ကို ကျော်ပြီး ခရီးသည်နာမည် အော်ခေါ်လိုက်သည်က…. မုံရွာလိုက်မယ့် လမ်းကြိုခရီးသည် ခုံနံပါတ်တစ် … Read more
September 25, 2021 by MM Daily Life
သိပ်တော်တဲ့ ယောကျာၤး ဆိုတာ မိန်းမတစ်ယောက် ကို ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စနဲ့ လူတန်းစေ့ထား နိုင်တဲ့ အပြင် ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ စိတ်ဆင်းရဲ မပေး တတ်သူ ကိုခေါ်တယ်။ သိပ်တော် တဲ့ မိန်းမဆိုတာ ဘဝမှာ တယောက် တည်းကျန် ခဲ့လဲ လောကဓံကို မမှုဘဲ ကိုယ့်စွမ်း ကိုယ်စနဲ့ ကိုယ့်ဒူး ကိုယ်ချွန် ရပ်တည်နိုင် တဲ့သူကို ခေါ်တယ် ။ သိပ်တော် တဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတာ ဝမ်းနည်းအားငယ်နေ တဲ့အချိန် အားပေး နှစ်သိမ့်မှူနဲ့ ကူညီ တတ် သူကိုခေါ်တယ် ။ သိပ်တော်တဲ့ လူဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ့်ဘဝဖြတ်သန်းမှုထဲ ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ ရလဲဆိုတာ နောက်လူ သိအောင် … Read more
September 5, 2021 by MM Daily Life
“ေယာက္်ားတိုင္း လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ မက္ေမာတဲ့ မိန္းမဆိုတာ” ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္…… (၁) မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဟာ သိပ္ေခ်ာ သိပ္လွစရာ မလိုဘူး။ လူၾကားသူၾကားထဲ ေခၚထြက္လို႔ရၿပီး အိမ္အျပန္ ေခၚျပန္လာလို႔ရရင္ ရၿပီ။ (၂) ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္ကို ငါလိုက္မေမးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါနဲ႔ေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ ငါ့တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ ေကာင္းေကာင္းခ်စ္ရင္ ရၿပီ။ (၃) အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ အလုပ္တစ္ခုရွာ လုပ္ႏိုင္တယ္။ မလုပ္ခ်င္ရင္ အိမ္မွာပဲ အိမ္ရွင္မအျဖစ္ ပီပီသသေန။ နင့္ကို ငါယူရဲရင္ နင့္ကိုေကြၽးႏိုင္တဲ့ အား ငါ့မွာရွိတယ္။ (၄) တျခားလူေလာက္ ငါခ်မ္းသာခ်င္မွ ခ်မ္းသာမယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားလူ နင့္ကို ေပးႏိုင္တဲ့အရာ ငါလည္းေပးႏိုင္တယ္။ (၅) နင့္အနားမွာ ငါေန႔တိုင္းအေဖာ္ျပဳႏိုင္ခ်င္မွ ျပဳႏိုင္မယ္။ ဒီအိမ္အတြက္ ငါအျပင္ထြက္ ႐ုန္းကန္ရမယ္။ … Read more
ေမာင္ေလးေတြကို ခ်စ္ပါ.. ထပ္ေျပာပါမယ္.. ေမာင္ေလးေတြကို ခ်စ္ပါ
ေမာင္ေလးေတြကို ခ်စ္ပါ.. ထပ္ေျပာပါမယ္.. ေမာင္ေလးေတြကို ခ်စ္ပါ လက္ေမာင္းေလး ဖက္ပီး မမ ဆိုၿပီး ခြၽဲခံရတဲ့ feel ကို ေပးႏိုင္တာ၊ မမ ေျပာစကား နားေထာင္ပါ့မယ္ ဆိုတဲ့ စကားေလးေတြနဲ႔ ၾကည္ႏူးစရာ အခိုက္အတန႔္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္တာ ေမာင္ေလးေတြပါ ။နည္းနည္းရစ္မယ္ စိတ္ဆိုးမယ္ ၿပီးရင္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ လက္ခံေပးႏိုင္တာ၊ ကိုယ့္ကို ဆရာမ တစ္ေယာက္လို အစ္မတစ္ေယာက္လို ခ်စ္ေၾကာက္ ႐ိုေသမွာ ေမာင္ေလး ေတြပါ။ေျပာလိုက္ရင္ ဟုတ္ ဆိုၿပီး ေခါင္းညိတ္ နားေထာင္တာ ၊ အျပစ္လုပ္ၿပီးရင္ မမကလဲ ဆိုၿပီး သြားၿဖီးၿပီးခြၽဲတဲ့ ခ်စ္စရာ အမူအယာနဲ႔၊ တစ္ခါတစ္ခါ လူႀကီးေလးေတြလို ပြစိပြစိနဲ႔ ဆုံးမတတ္တာ ေမာင္ေလးေတြပါ။အားငယ္ ဝမ္းနည္း ေနခ်ိန္မွာ ရင္ခြင္ထဲ ဆြဲသြင္းေပြ႕ဖက္ၿပီး … Read more
မိမိချစ်သူကို ဖုန်းခေါ်လို့ ဖုန်းမကိုင်တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲ အော်တိုပေါ်လာတဲ့ အတွေးများ မိန်းကလေးတွေ ဆိုတာလေ နည်းနည်းတော့ ပူပင်မှုတွေ များတဲ့ အမျိုးပါ ။ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှလည်း မဟုတ်ဘဲ သူတို့ဟာသူတို့ကို အပူအပင်တွေနဲ့ ပြည့်နေ တတ်တာ ။အတွေးတွေများပြီး စိတ်ပူပင် တတ်လွန်းတာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းကလေး မတူတဲ့ အချက်ပါ ။ မိန်းကလေးတွေက အသေးစိတ်တယ် ၊ကိစ္စသေးသေးလေးတွေ ကအစ အလေးထား တတ်တော့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ရန်တွေဖြစ် ၊ ငြိကုန်တာပါပဲ ။ချစ်သူမိန်းကလေးက ဖုန်းခေါ်လို့ အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် ဖုန်းမကိုင်မိတဲ့ အခါ မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းထဲမှာ အတွးပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်က တန်းစီပြီးတော့ကို ဝင်လာတာပါ ။ ၁။သူတစ်ခုခုများ ဖြစ်နေတာလား … Read more
ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီးဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁။ သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကပျော်ရွှင်ချင်ယောင် ဆောင်ပြဆောင်ပြ သင့်ရဲ့ဒုက္ခတွေ အခက်ခဲတွေကို ဝေမျှပြီး ခံစားနားလည် ဖြေရှင်းပေးတတ်ပါတယ်။ ၂။ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်မွှေးပျံ့တဲ့မိန်းမ သူမဟာ ဘယ်လောက်ပဲ သင့်ထက် ပညာတွေတတ်နေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ … Read more
August 19, 2021 by MM Daily Life
အရမ်းသဘောကျလို့ ကူးယူလာတာပါ။ တစ်ခါတုန်းက ကျနော့်မှာ သူ့အိမ်က ဒရိုင်ဘာကို အင်မတန်နိုင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် ဒရိုင်ဘာက သူ့ထက် အသက်ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က “ကို” တပ်ပြီး ခေါ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းကတော့ နာမည်ပဲခေါ်ပါတယ်လေ စကားပြောလည်း သူငယ်ချင်းက မင်းနဲ့ ငါပဲ ဒရိုင်ဘာအကိုကြီးကတော့ သူ့အလုပ်ရှင်ဆိုတော့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံရတာပေါ့လေ ဒီကောင်က ပြောစရာရှိလည်းပြော၊ ဆဲစရာရှိလည်းဆဲသဘောကောင်းပေမယ့် အထက်စီးတော့ဆန်ပါတယ်. တခါတလေ ကိုယ်ကတောင် ကြားထဲကနေ ဝင်အားနာရတယ်.. ဒရိုင်ဘာအပေါ် သူပြောပုံဆိုပုံတွေက ရင့်သီးပါတယ်.. ဟိုကတော့ သည်းခံရှာပါတယ် အလုပ်ရှင်မလား…? ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့သူငယ်ချင်းက ဒေါကန်နေပါတယ် ဘာဖြစ်တာလဲမေးလိုက်တော့ သူ့ဒရိုင်ဘာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ မလာလို့တဲ့ဒါနဲ့ ဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီး အိမ်လိုက်သွားကြတယ်.. တွေ့လို့ကတော့ ဆဲဆိုပြီး ဟောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ ဒရိုင်ဘာအိမ်ရောက်သွားတယ် သူ့အမေလို့ ထင်ရတဲ့ … Read more
အဖိုးတွေအဖွားတွေ ဈေးရောင်းနေတာမြင်ရင် ကိုယ်လိုတာလေးတွေဆို ဝယ်ပေးကြပါ ဈေးမဆစ်ကြပါနဲ့
July 19, 2021 by MM Daily Life
ပိုက်ဆံတစ်ရာဆိုတာ လက်ကောက် တစ်တောင်ဆစ်နဲ့ လူတွေအတွက် ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် အဘအတွက်တော့မောင်လေးကိုကျောင်းပို့ပြီး မေမေကဈေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ စံပြဈေးထဲဝင်ပို့ပေးတာ သပြေပန်းဝယ်နေကြအဖိုးဆီ အမေသပြေပန်းရွေးနေတဲ့ ၅ မိနစ်အတွင်းလေးမှာ လာဝယ်သမျှလူတွေဟာ အဘ သပြေတစ်စည်းဘယ်လောက်လဲ ၃ ရာသမီး ၂ စည်း ၅ ရာမရဘူးလားတဲ့မရပါဘူးသမီးရယ် အဘအဲ့ဒီတစ်ရာလေးဘဲမြတ်တာ ၆ ယောက်မှာ ၅ ယောက်ကအိုက်တစ်ရာလေးကို.မရမကဆစ်နေကြတာအဲ့ဒီထဲမှာ တစ်ယောက်ကဆို လက်ကောက်တစ်တောင်ဆစ်လောက်နဲ့ ကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်း ကုသိုလ်တွေများလာလိုက်တာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဝင်ပြောမိပါလေရောအမယူသွားလိုက်နော် အိုက်တစ်ရာ ညီမစိုက်ပေးလိုက်မယ်လို့ အဲ့တော့ ဘုကြည့်ပြန်ကြည့်တယ် သူမတက်နိုင်ဘူးထင်လို့ ကိုယ်စိုက်ပေးတာလေ အဖိုးလဲရောင်းရအောင်ပါ အဲ့လိုကျတော့လဲမဟုတ်ဖူး မယူတော့ဘူးဆိုပြီးထွက်သွားတယ်လူတွေအရမ်းဆိုးတယ် လူရှင်းတဲ့ထိစောင့်ပြီးမှ အမေကသပြေပန်းဖိုးရှင်းတော့ အဖိုးကပြောရှာတယ်သမီးရယ်တဲ့ အဘကအရင်ကဆို အဲ့တစ်ရာကိုမမြင်ဘူး လျှော့ပေးနေကြပါတဲ့ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ရာ တစ်ရာနဲ့ လူတွေအရမ်းများလာတော့ အိမ်ရောက်လို့ ပိုက်ဆံတွက်ရင် အဘမှာပိုက်ဆံက မပိုတော့ဘူးတဲ့ အဘအသက် … Read more
လေ့လာချက်တွေအရ ကမ္ဘာပေါ်က လူပေါင်း 840 သန်းက အခုချိန်ထိ မီးမရသေး ပါဘူး… လျှပ်စစ်မီး လိုအပ်နေတဲ့ မိသားစုတွေ အတွက် ပလက်စတစ် ဘူးခွံလေးတွေ သုံးပြီး မီးထွန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို The Liter of Light လို့ အမည်ရတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က စိတ်ကူးရခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့က လူထောင်ပေါင်းများစွာ အတွက် အလင်းရောင်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ယူဆောင်လာ ပေးခဲ့ပါတယ်။ The Liter of Light အဖွဲ့ဝင်တွေက စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်တွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ The Liter of Light အဖွဲ့ကို ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ Myshelter ဖောင်ဒေးရှင်းက 2011 ခုနှစ်မှာ … Read more
တစ္ဧကစိုက္တာနဲ႔ သိန္းေထာင္ခ်ီျပန္ရေသာ လီလီပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း ဘုရားပဲတင္တင္ အလွပဲထိုးထိုလီလီပန္းေလးနဲ႔မွ ကုသိုလ္ပိုရသည္၊က်က္သေရရွိသည္၊အလွထူးသည္ ထင္ၾကသည္။မဂၤလာအခမ္းအနား မ်ားပင္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပန္းစည္း၊ပန္းျခင္း အတြက္ျဖစ္ေစလီလီပန္းျဖင့္ အလွဆင္မည္ဆိုပါက တျခားေသာ ပန္းမ်ားထက္ေဈးပိုေပးၾကရသည္။ေပးရသည့္တန္ဖိုးနဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ပင္လီလီပန္းကၾကာရွည္ခံသည္တင့္တင့္တယ္တယ္ထူးထူးျခားျခား လွပသည့္အရည္အေသြးမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ဤသို႔ ထူးျခားလွပၿပီး ေဈးႀကီးသည့္လီလီပန္းကို မိမိတို႔အိမ္တြင္တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ လီလီပန္းသည္ သဇင္ပန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ဥမွေပါက္သည့္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။စတင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ဥ ျဖင့္ပင္အပင္ကိုပ်ိဳးရပါသည္။ပ်ိဳးဥႏုလွ်င္ အပင္မေအာင္ပါ။ပ်ိဳးဥအရင့္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ အဓိကလိုပါတယ္။စတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၅လအတြင္းအပြင့္ပြင့္ၿပီးေနာက္ထပ္ ပ်ိဳး ဥ ၅ ခုခန႔္ အပင္ေအာက္တြင္အျမစ္တြယ္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါသည္။ ေနရာေဒသမေ႐ြးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။အလင္းေရာင္ကို ႏွစ္သက္သည္။ေနရာေကာင္းရဖို႔လိုသည္။ေလာင္းရိပ္ က်လြန္းပါကေကာင္းစြာႀကီး ထြားမႈ မရွိပါ။အထူးသျဖင့္ နံနက္ေနေရာင္ ေကာင္းစြာရဖို႔ လိုပါသည္။ေရဝပ္ဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ပန္းအိုးျဖင့္လည္းစိုက္ပ်ိဳးလို႔ ရပါသည္။ ေျမေဘာင္လုပ္၍ စိုက္ပ်ိဳးပါကေျမကို ႏြားေခ်းမ်ားမ်ားနဲ႔ ႏွပ္ထားပါ။ေဘာင္ျဖင့္ စိုက္မည္ဆိုပါက အက်ယ္ ၃ေပျပဳလုပ္ပါ။ ေပါင္းျမတ္မ်ား ရွင္းလင္းရလြယ္ကူရန္ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ … Read more